प्रचण्ड एक हाँस्यास्पद पात्रमा दर्ज भएकै हुन् त ? » नेपाल प्लस
प्रचण्ड एक हाँस्यास्पद पात्रमा दर्ज भएकै हुन् त ?
नेपालमा समाजवादको नारा भजायर व्रम्हलुट गर्नेहरुको भिड लागेको छ । एमाले र माओवादी केन्दको वीचमा चुनावी तालमेल हुने रे र पार्टी एकता सम्म पुग्ने रे अनि समाजवादको लागि एकता गर्ने रे । सुन्दा मिठो छ । यसका पछाडिको वाध्यात्मक अवस्था के हो त ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विचमा कुराकानी हुंदा अवको मुख्य चुनौती भनेको विप्लव भएकाले यसका लागि कार्यनिती र रणनितीनै वनायर अगाडि वढ्नु पर्ने निश्कर्षमा उनिहरु पुगेका हुन् । विप्लवसंग किन यति धेरै अत्तालिएका छन् त नेपालका आफुलाई ठुला भन्ने वामपन्थी दलहरु ? सत्तामा दलालहरुको हालीमुहाली, व्यापार व्यावसायमा दलालहरुको हालीमुहाली, सत्ता टिकाउन संसदीय चलखेल, संस्थागत भ्रष्टाचार, कालोवजारी, राष्ट्रघात, शिक्षा स्वास्थ्यमा दलाली तथा व्यावसायीकरण, महंगी जस्ता जनविरोधी चरित्रनै संसदीय व्यवस्थाको आधार हो । यो व्यवस्था प्रति वफादार रहने भन्दै यी दुवै दलले थुप्रै ठाउंमा ल्याप्चे लगाएका छन र यी दुवै दलका मुख्य तथा अधिकांश नेताहरु दलाल तथा पुंजीपतिमा परिणत भइसकेका छन् ।
यो व्यवस्थामा नेता र दलहरुले जतिसुकै खरानी धसे पनि गन्तव्य र पतन चाहिं दलाल पुंजीवादनै हो । यो दलाल सत्ताको विरुद्ध विप्लवले संघर्षको मशाल वालेका छन् । यो संघर्षलाई प्रतिरोध गर्न वा यो पतनलाई ढाकछोप गर्न उनीहरुका सामु दुइ विकल्प मात्र छन् ।पहिलो दलाल पुंजीवादी व्यवस्थाको विरुद्धका आवाजलाई दमन गर्नु,दोस्रो उनिहरुको जस्तै नारा दिनु । त्यसका लागि प्रचण्ड ओली गठवन्धन चुनाव जित्ने र उनिहरुको विरुद्धको आवाजहरुलाई दमन गर्ने त्यो सफल नभए समाजवादी आन्दोलनमा जाने हो भनेर अर्को भ्रम दिने रणनितिमा कस्सेर लागेको देखिन्छ । नेकपाले दुइवटा विषयमा आफ्नो अध्ययनलाई केन्द्रित गरयो । पहिलो नेपालमा वामपन्थि आन्दोलनमा आउने विभाजन र विचलन दोस्रो विश्वमा समाजवादी सत्ता असफल हुनाको कारण ।
नेपालको सन्दर्भमा वामपन्थी आन्दोलनमा अन्तरविरोधको पहिचान गर्ने र त्यसलाई समयमानै हल गर्ने समस्या रहेकाले त्यसलाई हल गर्ने विधीको विकास गऱ्यो । समाजवादी सत्ताको सम्वन्धमा सन् १९१७ को अक्टोवरमा लेनिनले रसियामा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे । क्रान्ति सम्पन्न भए पछिको समाजवादी सत्ता सन्चालन गर्दा श्रम गर्ने किसान मजदुर र कर्मचारीहरु (व्युरोक्रयाट्स) को वीचमा राज्यले समान सुविधाको व्यवस्था लागु गर्न अलमलियो । त्यसले गर्दा समाजमा विभेद देखा पर्दै गयो र अन्तत समाजवादी सत्तानै ढल्न पुग्यो । यो कमजोरीलाई सुधार गरेपछि दलाल पुंजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य निश्चित छ, समावादी सत्ता सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
अहिले विश्व साम्राज्यवाद पनि वहुध्रुवमा परिणत भएको,अन्तरराष्ट्रिय सन्तुलनका कारण भारतलाई नेपालमा शैन्य हस्तक्षेपमा उत्रन सहज नभएको र नेपाली जनतामा परिवर्तनको चाहना तिव्र भएकाले यदि कुशलतापुर्वक नेतृत्व प्रदान गर्न सकेमा नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादी क्रान्ति गर्न सकिने वस्तुगत परिस्थिति वनेको छ । यो क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व नेकपा ले गरेको छ । यो पार्टी समाजवादी सत्ताको मोडेल सहित अगाडि वढेको छ ।यो धारले प्रचण्डले क्रान्तिको तयारी गर्ने समाजवादी आन्दोलनको तयारी गर्ने भन्ने भ्रम मात्र हो भन्ने कुरालाई जनता समक्षनै उदांगो पारिदिएको छ । नेकपाले क्रान्ति गर्ने नाममा कुनै एउटा शास्त्रिय वाटो अवलम्वन गर्छ र केहि समयमानै विलय हुन्छ भन्ने प्रचण्ड, ओली लगायतका नेताहरुको भ्रम थियो । तर यसले नेपालको विशिष्टतामा नेपालकै चरित्रको क्रान्ति हुने र हाल वहालवाला सुरक्षावल,कर्मचारी,मध्यमवर्ग लगायतको पनि सहभागितामा क्रान्ति हुने कुरालाई अगाडि साऱ्यो र यसतर्फ माहौल तिव्र वनेपछि अहिले संसदवादी सत्ता अत्तालिन पुगेको छ ।
एकिकृत जनक्रान्ति राजनैतिक कार्यदिशाको रुपमा सफलतापुर्वक लागु हुन थालेपछि दक्षिणपन्थी धारहरुमा खैलावैला परेको हो । आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद र समाजवाद परस्पर विरोधी विषय हुन् । प्रचण्ड राष्ट्रपति भएमा केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुने भन्ने कुरा मा सहमति भएको छ रे । जनताले भोट नदिएर हराउने भए भन्ने डर भएपछि त आफ्रनो राजनैतिक कार्यक्रमपो गलत भएछ भनेर समिक्षा गर्न पर्ने,नयां कार्ययोजना ल्याउन पर्नेमा जनतालाई जित्ने वनाउन होइन आफु जित्नको लागि जे पनि गर्न कस्सिने प्रचण्डको गलत नियतीको शिकार कति हुने? अहिले वजारमा जताततै मजाक चलिरहेको छ । एउटा वडा अध्यक्षको चुनाव लड्न लाखौं खर्च,गाविसको प्रमुखको लागि करोडौंको खर्च नत्र टिकट नै नपाइने । खर्च नगरी टिकट पाए पनि जित्न नसक्ने किनकि उसले चुनावमा प्रचार प्रसारमा खर्च गर्न सकेन ।यस्तो विकृत चुनावको खारेजी र नयां अभियानको शुरुवात नगरेर जित्नको लागि जो संगपनि गठवन्धन गर्ने प्रचण्ड संग अव के आश गर्ने ?
विचित्रको कुरा त एमालेले माओवादी केन्द्रको राजनैतिक एजेण्डाहरु मानेको हुनाले माओवादी केन्द्रका समर्थकहरुले यो एकतावाट उत्साहित हुन पर्ने रे । भनेपछि प्रचण्डका एजेण्डा मानेको हुनाले अव ६० प्रतिशत एमाले ४० प्रतिशत माओवादी केन्द्रको शेयर हुने भएको होला हैन गठवन्धनमा?एमालेले के के एजेण्डा मान्यो माओवादी केन्द्रको? मजाकको पनि हद हुन्छनी । यो चाहिं भन्न सकिन्छ प्रचण्डले माओवादी केन्द्र लगेर एमालेमा विसर्जन गरे । नेकपाका महासचिव विप्लवले भनेका थिए प्रचण्डले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि माओवादी केन्द्रलाई एमालेको पोल्टामा सुम्पिनु वाहेक अर्को उपाय वांकि छैन । विचमा कांग्रेस संग गठवन्धन वनाएर अलि सरप्राइज दिएका थिए तर अन्तत विप्लवको भनाइलाई पुष्टि गरे । यो गठवन्धन टिक्ने कुरामा शंका छ । किनकी यो गठवन्धनले भारतलाई दुखी र चिनलाई खुशी वनाउने पक्का छ ।
भारतीय शाषक वर्गको आशिर्वाद विना यहि परिवेशमा नेपालको दलाल सत्ता टिक्न सक्दैन । यो गठवन्धन चुनाव जित्नकै लागि वनेको स्पष्ट भएपछि भारत र नेपाली कांग्रेस चुनाव गराउन तिर लाग्ने छैनन् । गठवन्धन गराय जस्तो गर्ने र अन्तत चुनाव नगराउने षडयन्त्रमा पनि हुन सक्छन प्रचण्ड । अहिलेनै अरु धेरै कुराहरु गर्न अलि हतारो हुन सक्छ तर यतिचाहिं भन्न सकिन्छ अव प्रचण्ड नेपाली राजनैतिक माहौलमा एक हास्यास्पद र लज्जास्पद पात्रको रुपमा दर्ज भएका छन् । त्यसैले नेपालमा तथा प्रवासमा पनि प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी साथीहरु विचलनवादको अलमलमा नपरि एकिकृत जनक्रान्तिको वाटोमा लामवद्ध हुन ढिला नगरौं ।
(भुजेल नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा युरोपका अध्यक्ष हुन्)
प्रकाशित मिति: October 4, 2017